सँगसँगै खानै नहुने १० खाने कुरा ! के – के खान हुदै न त ? जानिरख्नुहोस «
सँगसँगै खानै नहुने १० खाने कुरा ! के – के खान हुदै न त ? जानिरख्नुहोस
प्रकाशित मिति :6January, 2019
काठमाडौँ – खाना स्वादिलो भयो भने मानिस खानाको स्वादमा हराउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा मानिसले खानेकुराको नियम भने भुल्छन् । कहिले काँहि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा तपाइँको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्छ ।
कुनै खानेकुरा अर्को खानेकुरासँग मिसाएर खानु घातक हुन सक्छ । यहाँ मिसाएर खान नहुने १० खाने कुराको चर्चा गरिएको छ । के – के खानेकुरा संगै खान हुदै न त ?
१ दुध र दही
खाना स्वादिलो भयो भने मानिस खानाको स्वादमा हराउँछन् । तर कतिपय अवस्थामा मानिसले खानेकुराको नियम भने भुल्छन् । कहिले काँहि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा तपाइँको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्छ ।
कुनै खानेकुरा अर्को खानेकुरासँग मिसाएर खानु घातक हुन सक्छ । यहाँ मिसाएर खान नहुने १० खाने कुराको चर्चा गरिएको छ ।
२ मासु र मिठाइ
३ कोल्डड्रिङ्क्सपछि गुटका वा पान मसला
४ आलु र भात
५ प्याज र दुध
६ माछा र दही
७ खाना र फल
८ दुध र कागती
९ मासको दाल र दही
१० दही र परौठा
यदि तपाइँ परौठा खाँदै हुनुहुन्छ भने दही नखानुस् । किन भने यी दुवैको मिश्रणमा शरीरमा नकारात्मक तत्व पैदा हुन सक्छ । यसले तपाइँको शरीरको उर्जा समेत घटाइदिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
८ दध र कागती
यदि तपाइँ परौठा खाँदै हुनुहुन्छ भने दही नखानुस् । किन भने यी दुवैको मिश्रणमा शरीरमा नकारात्मक तत्व पैदा हुन सक्छ । यसले तपाइँको शरीरको उर्जा समत घटाइदिने विज्ञहरु बताउँछन् ।